Restaurant Nhare Yemagariro Yevatengi Zvinoitika 2012 | Martech Zone
Restaurant Nharembozha Yemagariro Vatengi Maitiro 2012
Chishanu, Mbudzi 30, 2012 Chitatu, November 28, 2012 Douglas Karr
Pakave nehuchapupu hwakawanda kune zvinokanganisa nharembozha pane zvakajairika zvekutengesa zvitoro, asi zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Mobile Social Consumer (MoSoCo) maitiro ari kuita zvakakomba kuresitorendi uye kugamuchira vaenzi mabasa zvakare!
Mapuratifomu epafoni uye mapiritsi ave zvigadzirwa zveiyi tekinoroji kuchinjika, uye hazvishamise kuti maresitorendi, zvekudya & zvekugamuchira vaeni zvigadzirwa zviri kubata nekuvharira mukati. Mune ino Restaurant Nhare Yemagariro Yevatengi Trend Report yakaunzwa kwauri neDigitalCoCo uye neRestaurant Social Media Index, isu ticha tarisa kuti ndeapi mabhenji ari kushandisa iyo nyowani nharaunda yenharembozha neyemagariro zvakanakisa kune vatengi kuita. Kubva Nharembozha Yemagariro Vatengi Maitiro e2012
Tags: Geolocationmutsalocation based servicesmosocoresitorendiindasitiri yekudyira
Mahoridhe Maitiro Vanotengesa Havagone Kurega
Zvita 3, 2012 na2: 55 PM
Iyi inyaya yakakosha data, uye kwete chete kune indasitiri yeresitorendi. Ini ndinonzwa kuti inotaura zvakawanda kune chero mabhizimusi madiki, vanhu vari kutanga kuwedzera kunyanyo shamwaridzana nevanhu nekwavari uye nezvavanoda nezvavasingade. Idzo dzekutanga mbiri dzekutsvaga kwandiri ndidzo dzakakosha kubhodhi: Nzvimbo uyezve Ongororo. Yakakura data kune chero bhizinesi diki kuti iteerere.